७ बैंकद्वारा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर सार्वजनिक , कुन बैंकको कति ? - Jagaran News Jagaran News
७ बैंकद्वारा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर सार्वजनिक , कुन बैंकको कति ?
Published On : 16 September, 2020 1:27 pm
काठमाडौं , भदौ ३१ । ७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले बुधबार पछिल्लो ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक, सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एभेरेष्ट बैंक र स्टाण्डर्ड चार्टड बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बुधबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले साधारण निक्षेपमा ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने उल्लेख गरेको छ । यो बैंकले मुद्धति निक्षेपमा भने व्यक्तिगत ६ प्रतिशत र संस्थागत ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम् ७।२५ प्रतिशतसम्म दिने जनाएको छ । कर्जातर्फ भने बैंकले बेस रेटमा न्युनतम् १।२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम् ३।२५ प्रतिशत लिने जनाएको छ । बैंकको असार मसान्तमा बेस रेट ५।८० प्रतिशत रहेको छ ।
हिमालयन बैंकले साधारण निक्षेपमा २ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म र मुद्धति निक्षेपमा ३ प्रतिशतदेखि ७।२५ प्रतिशतसम्म दिने उल्लेख गरेको छ । उता एनसीसी बैंकले साधारण निक्षेपमा ५ प्रतिशतसम्म र मुघति निक्षेपमा ८.२५ प्रतिशतसम्म दिने उल्लेख गरेको छ । कर्जा तर्फ भने एनसीसीले बेसरेटमा २ देखि ५ प्रतितशसम्म प्रिमियम लिने बैंकले जनाएको छ । एनसीसी बैंकको असार मसान्त्सम्म ९.०३ प्रतिशत बेस रेट रहेको छ ।
यसैगरी सनराइज बैंकले साधारण निक्षेपमा २.५० प्रतिशतदेखि ४.५० प्रतिशतसम्म र मुद्धति निक्षेपमा ७।७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने उल्लेख गरेको छ । कर्जातर्फ भने सनराइजले बेस रेटमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर लिने बताएको छ । सनराइजको असार मसान्त्सम्म ८.९५ प्रतिशत बेस रेट रहेको छ ।